EyeNkanga 25, 2019 by I-Rudyard, Iimbono zizonke:
Abafakizicelo abangaqhelanga nenkqubo yemali mboleko yokuthenga indlu abanakuqonda ukuba imali mboleko yendlu ingahluka kakhulu ekufumaneni imali mboleko yemoto okanye yokurenta indlu. Kubalulekile ukuba ukwazi ukuba uqhubeke ufunda ukuze ufumane iingcebiso zethu ezi-5 ezifanelekileyo zokufumana imali mboleko yendlu!
1) Fumana ukuvunywa kwangaphambili kweMali mboleko
Ukufumana imvume yangaphambi kokuba ufumane imali mboleko yobambiso ngumbono oqinisekileyo ukusuka kwindawo oya kuyo, njengoko oku kuya kukuxelela ukuba ingakanani imali onokuyifumana, kunye nenqanaba lamaxabiso kulindeleke ukuba ujonge kuyo nendlu entsha. Ukuba uvunyiwe ngaphambi kwexesha, ungalindela ukuba imali mboleko yakho iqhubekeke ngokuphumelelayo kuthelekiswa nabanye abangazange.
2) Lungiselela amaXwebhu akho
Kubalulekile ukuba kwangaphambi kokuba uqalise ukukhangela indlu, ukuba onke amaxwebhu ayimfuneko aqokelelwe kwaye alungelelaniswa. Oku kunokubandakanya iingxelo zebhanki, imbuyekezo yerhafu kunye nolunye ulwazi lwezezimali oluhlala luthatha ixesha lokudibana kwimithombo eyahlukeneyo. Ngumbono olungileyo ukuthatha eli thuba ukucela ibhanki yakho ukuba ihlole uluhlu lwezinto ezinokukuhlawulwa, ukuba awuqinisekanga ukuba ngawaphi amaxwebhu afunwa ngumthetho.
3) Musa ukuyeka uMhla wakho
Ukuncamathela kumqeshi wakho ngelixa uqhubeka kwinkqubo yokuthenga ekhaya kungabalulekile ekuvunyelweni kwemboleko mali yokuthenga indlu. Naluphi na utshintsho olwenzekileyo kwintsebenzo yakho okanye inqanaba lomvuzo linokubangela ukuba iiflegi ezibomvu ziphakanyiswe kwaye zimiswe okanye ngokuqinisekileyo zilibazise inkqubo yakho yokubambisa. Ngokusekelwe kulwazi olunikezwe kwisicelo sakho, ababolekisi banokukuvumela okanye bakukhabe, kuxhomekeke ekuvandlakanyeni iimali zabo nokuba ingaba usakulungele na ukubolekwa imali.
4) Bhatala ityala elidala kunye nokuthintela ityala elitsha
Nangona kunganyanzelekanga ukuba amakhadi akho etyala ahlawulwe ngokupheleleyo ukuze afaneleke kwimali mboleko yemboleko mali, kubalulekile ukukhumbula kancinci amatyala akho, kokungcono ukuma kwakho. Imali yakho eqokelelweyo yamatyala ayigqibeli kuphela ukuba ungalufumana na uboleko-mali, kodwa unokugqiba ukuba ingakanani imali onokuyifumana kumbolekisi. Ababolekisi bayakuvuyela ngovuyo umyinge wakho wetyala-ukuya kwingeniso ukuze babone ukuba bangakunikeza ngantoni na malunga namanani obambiso, kwaye baya kulungelelanisa ngokwenqanaba lakho lokuthenga
5) Sebenza noMbolekisi-mali onamava
Ukuba ujonge ukufumana imali mboleko yendlu evunyelweyo, qiniseka ukuba usebenza nabanamava umthengisi wemali mboleko yendlu eMelbourne. Kubalulekile ukuba ufumane ingcebiso eninzi kunye noncedo oluvela kubo ukuze ulungiselele imali mboleko yendlu evunyiweyo. Qiniseka ukuba ubuza imibuzo emininzi kangangoko kunokwenzeka, kubandakanya ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukwenza isicelo kwaye ufumanise ukuba bangakugqiba ngokukhawuleza kangakanani na ukubambisa ngento yakho, ngelixa ujonga kusengaphambili nayiphi na imicimbi enokubakho malunga nengqesho yakho okanye itsheki yakho.
Landela ezi Iingcebiso ezi-5 eziSebenzayo ukuze uMali wakho weKhaya avunyelwe kwangoko.
I-Rudyard Novemba 25, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Imali yezezindlu noqhotyosho Imali mboleko mali, imali. Bookmark le Permalink.
Ngamana 16, 2018 Iingcebiso ezi-5 ezibalulekileyo kubathengi beKhaya lokuqala Ukuthenga ikhaya lakho lokuqala yenye yezona zinto zonwabisayo, kunye noxinzelelo ebomini bakho. Le yeyona nto ithengwayo inkulu okhe wayenza! Nazi ii-5 zeengcebiso ezibaluleke kakhulu kubathengi bekhaya lokuqala. Hlala ngaphakathi koHlahlo-lwabiwo mali lwakho Impazamo eyenziwa ngabaninimzi abaninzi kukufumana eyona mali iphelileyo baya kuvunywa, kwaye bayichithe yonke. Ngenxa yokuba umbolekisi angavuma ukuboleka imali ethile, oko akuthethi ukuba kufuneka uboleke […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
January 31, 2017 Uyifumana Njani imvume yokuhlawulwa kwangaphambili kweMali mboleko yeKhaya Xa uthenga ikhaya, into enexesha elide ekubandakanyekeni kwinkqubo inokuba ngumthambo wokuphoxeka kubantu abaninzi. Ngelixa kukho amaxesha apho umthengisi oshukumisayo ethe wawaxabisa amaxabiso empahla yabo ukuze bahambe ngokukhawuleza kwaye banxitywe nomthengi obhatala ityala lakhe elivumela ukuba bafumane imvume ngokukhawuleza, le meko inqabileyo. Kubantu abaninzi, inye kuphela indlela yokukhawulezisa inkqubo yokuthenga ekhaya nokufumana imvume kuqala kwikhaya […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Oktobha 13, 2018 Sebenzisa umrhwebi wemali mboleko xa kuthelekiswa neBhanki Ukuba ujonge ukufumana imali-mboleko, zimbini iindlela eziphambili ekufuneka uphonononge. Owokuqala usebenzisa umrhwebi wemboleko mali kwaye owesibini yibhanki. Kukho abathengisi bempahla mboleko abasebenza njengophakathi phakathi kwababolekisi bemali mboleko kunye neebhanki. Bayanceda ukukhusela imali kumnini-ndlu. Kwaye ke kukho iibhanki kunye nababolekisi abajongana ngqo nomnini khaya ukuze banike imali mboleko eyimfuneko kwinqanaba lokuthengisa. Malunga ne-10% yazo zonke iimvelaphi zemboleko mali yokubolekwa […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Agasti 16, 2017 Ngaba kunzima ngakumbi ukuthenga ipropathi ukuba ndine-ILR? Ukuthenga ikhaya kunokuba yinto enoxinzelelo olukhulu kwaye kuthatha ixesha ukuyoyisa, ngalo lonke uvavanyo lokuthenga ngetyala kunye ne-hoops ekufuneka utsibele kulo, kodwa ukuba unikwe imvume yokuba ngummi nje, ngaba oku kuthetha ukuba kunokuba nzima ngakumbi uza kuthenga ikhaya? Ukufumana imali-mboleko njengomphambukeli yinto ekuxoxwa ngokungaqhelekanga, kodwa njengoko abantu abaninzi bekhetha ukuhlala e-UK, kubalulekile ukuphonononga zonke iindlela onokukhetha kuzo kunye nokuqinisekisa ukuba yonke into […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Juni 5, 2017 Amaxabiso ombane akhuphukayo ayinto yokuqhekeza kubantu abaninzi Kubalulekile ukuba abantu baqhubeke ngaphezulu kwazo zonke iindleko zamakhaya abo. Ngokuqinisekileyo kubalulekile ukuba abantu babeke ngaphambili ukubhatala izindlu okanye iintlawulo zabo eziqeshisayo inyanga nenyanga, kodwa emva koku, zininzi iindleko ezibalulekileyo ekufuneka zihlawulwe. Uninzi lwezi bhili zokunyuka, kunokuba nzima kubantu abaninzi ukugcina iintloko zabo ngaphezulu kwamanzi kwaye zihlala ngaphezulu kokuhamba nokuhamba. Kungenxa yoko le nto iindaba zokuba umboneleli wamandla usekwe ukuphakamisa ityala labo okwesibini […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Novemba 12, 2019 Malunga neziVumelwano zeRente yokuqeshisa ekhaya Emva kokufumana indlu okanye indlu oza kuyirenta, wena umqeshi kunye nomnini-ndawo kufuneka nifikelele kwisivumelwano sokuqeshisa. Amagama kwesi sivumelwano kufuneka aqondwe nguwe umqeshi, kunye nomnini-ndawo, kwaye isivumelwano kuyaxoxiswana ngendlela obuya kwenza ngayo ngemoto. Isivumelwano sokurenta phakathi komqeshi kunye nomnini-ndawo kuthiwa sisivumelwano, kwaye esi sivumelwano kufuneka sibhalwe phantsi. Intlawulo Injongo yesivumelwano kukuseta imigaqo kunye nemigaqo yerenti. Okuninzi […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
Oktobha 20, 2016 Uyihlawula njani imali mboleko yendlu yakho ngepropathi yokutyala Imali mboleko yasekhaya isongezwe rhoqo imithwalo kunye noxinzelelo ukuba wonke umntu ufuna ukukhupha ngokukhawuleza. Ukongeza kwinto yokuba ungasayi kuhlawula umrhumo oqinisekileyo kumvuzo wakho ngohlobo lwemali mboleko yasekhaya, uxolo olufumanayo ngengcinga yokuba le ndlu uhlala kuyo yeyakho ngokupheleleyo kungaphaya kokuthelekiswa. Kungenxa yoko le nto abantu bezama ukukhangela iindlela ezikhawulezayo nezilula zokuhlawula iimali mboleko zabo emakhaya. Wakhe wacinga ngotyalo mali […] exhonyiweyo Imali yezezindlu
January 14, 2017 Iindlela ezi-3 zokufumana amaNqanaba asezantsi eTyala Xa uyothenga indlu, enye yezona ndlela unokuziqesha kukujonga iindawo eziphantsi. Izinga lenzala ephantsi lingakusindisa amawaka eedola okanye ngaphezulu kwelixesha uhlawula imali mboleko. Namhlanje, siza kujonga kwezona ndlela zintle onokuphanda ngazo, uthelekise, kwaye ekugqibeleni ufumane eyona nto ibhetele yokubambisa. Iindlela ezi-3 zokuThenga amaxabiso aphantsi okuBoleka xa ujonga inzalo yemali mboleko, kwaye ukongeza […] exhonyiweyo Imali yezezindlu